मलेसियाले डिसेम्बरसम्म नेपाली सुरक्षा गार्डमा भित्राउने बारे आयो यस्तो खबर ! - jagritikhabar.com
मलेसियाले डिसेम्बरसम्म नेपाली सुरक्षा गार्डमा भित्राउने बारे आयो यस्तो खबर !
वर्कफोर्स रिक्यालिब्रेसन प्रोग्राम (आरटीके) मार्फत पुन: कामका लागि आवेदन दिएका दुई लाखभन्दा बढी विदेशी कामदारलाई यस वर्षको अन्त्यसम्ममा कामको अनुमति भिसा दिने अपेक्षा गरिएको छ।
गृहमन्त्री दातुक सेरी हमजाह जैनुद्दीनले उत्पादन, निर्माण, कृषि र वृक्षारोपण क्षेत्रहरूमा रोजगारदाताहरूको आवेदनमा भर पर्नुको अलावा खोप पूरा गरेका विदेशी कामदारलाई प्राथमिकता दिइने छ।
“हामी (आरटीके दर्ता) मा परेका र पूर्ण खोप पाएका अबैधानिक बिदेसीहरूलाई प्राथमिकता दिनेछौं। यी विदेशीहरूले दुई हप्ता भित्र काम गर्न सक्छन्,” उनले जिल्ला प्रहरी प्रधान कार्यालय (आईपीडी) पत्रकार सम्मेलनमा आज भने। साथै प्रहरी महानिरीक्षक तान श्री एक्रिल सानी अब्दुल्ला सानीको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।